‘आधासत्य’ उपन्यास झापामा सार्वजनिक
बिर्तामोड, असार ३० । साहित्यकार भगवती ढुङ्गेलद्धारा लिखित उपन्यास ‘आधासत्य’ झापामा सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा केहि साता अघि लोकार्पण गरिएको उक्त उपन्यासको शनिबार विर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको
आज भानुजयन्ती, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै
काठमाडौं, असार २९ । आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २ सय ५ औं जन्मजयन्ती आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । भानु जयन्तीको अवसरमा काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । भानु प्रतिष्ठानका
‘राजनीतिको तनावमा धुन सिर्जनाले शान्ति दिन्छ’
चिरञ्जिबी घिमिरे काठमाडौं, असार २१ । भूकम्पमा गुमेकाको आफन्तको कसम हामी जुट्छौँ फेरि उठ्छौँ, हिरोसिमापछिको जापान भएर कहिल्यै नहार्ने गोर्खाली मुटुको कसम, फेरि जित्छौँ बदलिन्छौँ, बनाउछौँ नेपाल । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पछि
काठमाडाैं, असार २० । मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले आउने आम्दानिले उत्साह जगाउनेछ । पानी तथा खनिज पदार्थको व्यावसायबाट मोटो रकम हात लागि हुने योग रहेकोछ । प्राकृतिक स्रोत तथा
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – भाग्यको मार्गमा अवरोध आउनसक्छ । प्रेम र भाइचाराका लागि दानपुण्यमा सहभागी हुनु भएमा रोकिएको काम बन्नसक्छ । प्रयासमा सफलता
बुढेशकालको लाठी ( कथा )
आसना पौडेल रातिको भात अलिकती उब्रिएको छ, घीउ हालेर भुटिदिन्छु त्यही खाएर क्याम्पस जा । फर्सीका मुन्टा फलेपछि भुटुन हाल्न भनी साँचेको हर्पेको पिँधैमा टास्सिएको निथारलाइ डाडुको चोसाले कोट्याउदै विष्णुदेवीले
पैदल यात्राको ३१ औं दिन : जब मुगुको श्रीकोट पुग्यौं
७५ जिल्ला पैदल यात्राको दौडानमा २०७३ चैत्रमा मसहित केही साथीहरु मुगुको श्रीकोट पुगेका थियौं । अघिल्लो रात मझ्चौरमा बसेर बिहानै निस्केका हामी २ घण्टा हिडेपछि, गोजीमा रहेको पैसा ले चिउरा
उज्ज्वल प्रसाई यो निर्जन टापु होइन, सहर हो । त्यसैले वरिपरि मान्छेछन् । छन् दुःखहरू । त्यसो त खुसीका क्षणहरू पनिनभएका होइनन् । हरेक दुःखका सीमा होलान् । तर, सुखका सीमितताबारे मान्छे बढ्ता जानकार छन् ।विश्वासका झिना त्यान्द्राहरू छन् । ती कहिले च्वाट्टचुँडिन्छन् । चुँडिएका त्यान्द्रा हावामा कति दिनसम्म त्यसैतैरिइरहन्छन् । त्यस्ता अधुरा त्यान्द्रा कुनै बेला नयाँसम्बन्धमा पुगेर जोडिन्छन् पनि । अविश्वासको धारमापरेर जुनसुकै बेला ती फेरि चुँडिन सक्छन् । पूरैरोडम्याप पहिल्यै कोरेर कुनै सम्बन्ध बनेको हुँदैन ।जिन्दगीको गुगल म्याप बनाउने कोसिसमा ज्योतिषीकहाँ धाउनेहरू आफैंमाथि विश्वास नभएका दुःखीहरू हुन् । सहरमा यस्तादुखियाहरूको कमी छैन । सहरमा घण्टाघर छ । घण्टाघरले आफ्नो घण्टे घडी बजाइरहेकै होला । कोलाहल बढेपछि सहरमा त्यसको आवाज कतै नपुगी नैबिलाउन थालेको छ । एकथरी मानिस घण्टी सुन्ने अभिलाषा बोकेरै बसेका छन् । तर, न उनीहरू कोलाहल घटाउने साहस गर्छन्न घण्टाघरको भोल्युम बढाउने चेष्टा नै । घण्टीको आवाज नसुनिएकामा तिनले गरेको बिलौनाले सहरमा थप कोलाहल बढेको भनेपत्तो पाउँदैनन् । अस्ति भर्खरकै घटना त हो, कसैले चाहेर पनि नजिकै रहेको नारायणहिटीमा फेरिन लागेको समयको पूर्व सूचनाघण्टाघरले पुर्‍याउन सकेन । आजकल त्रिचन्द्र कलेजको आँगनमा छरिने घण्टीको आवाज ‘डिस्टोर्टेड’ छ भन्छन् बुझक्कडतन्नेरीहरू । मण्डला बुक प्वाइन्टमा भेटिएका एक युवा कवि भन्दै थिए, ‘मध्यरातको नीरवतामा पनि घण्टाघर सुनिँदैन आजकल ।’ कसैले घण्टाघरमा अलार्म घण्टी सेट गरेको छ कि छैन ? यदि त्यस्तो आशामा कोही बसिरहेको भए उसलाई लागेको हुनुपर्छ, एकदिन त्यो घण्टी सबै कोलाहल चिरेर बज्नेछ
जुनेलीले एकपछि अर्को लाजका पर्दाहरू खोल्दा… (उपन्यास अंश)
तिहारको समय थियो । छोरी उषा मामाघरमा थिई । जुनेलीले आशालाई फोन गरी । ‘आज गाईतिहार । भोलि भाइतिहार तर टीको भने यो साल लाउन नमिल्ने भो । दाजु जुठोमा
त्यसपछि म पनि भिनाजुमा रमाउन थालेँ… (कथा)
के छैन र मेरो कोठामा ? विलासिताको सामानले भरिएको छ । दुई छाक तातो भात पनि खान नपाएर बितेको त्यो मेरो बाल्यावस्थामा कसले सोचेको थियो होला र मेरो भविष्य यत्ति